Destination Germany | | Saripika sary maimaim-poana ho an'ny download
Zavakanto sy landy any Alemaina
Ny Repoblika Federalin'i Alemaina dia lasa malaza ho toy ny toerana fitsangantsanganana fizahan-tany mandritra ny taona maro. Izany dia vokatry ny fisian'ny fitaovam-pitaterana tsara eo amin'ny toerana sy ny karazana fahitana. Na ny mpanao vakansy, ny kolontsaina na ny mpankafy natiora, dia mahazo ny lanjany rehetra ao amin'ity firenena ity ny rehetra.
Raha mikaroka mozika avo lenta ianao, trano fisakafoanana tena tsara sy fahafahana maro tsy hankalaza, mitsidika iray amin'ireo tanàna efatra lehibe indrindra: Berlin, Hamburg, Munich sy Cologne. Berlin dia tsy isalasalana fa ny tanàn-dehibe ara-kolontsaina ao amin'ny firenena ary mahagaga fa na dia mpitsidika tsy tapaka hatrany aza izy ireo miaraka amin'ny rivotra iainany mivelatra.
Allemagne - Alte Oper, Frankfurt am Main
Hamburg, miaraka amin'i Speicherstadt, malaza eran-tany, manolotra fialambolam-bolo mahavariana, raha i Munich, ny afovoan'i Bavaria dia manasa anao hanao dia lavitra mankany amin'ny faritra manodidina. Cologne indray mampiaiky ny Rhineland sariaka sy Cologne Cathedral, nitsidika trano indrindra ao amin'ny firenena.
Any Alemana dia afaka mijery ireo olona an'arivony taona lasa ianao noho ny relika maro. Na aiza na aiza misy ireo sombintsombin'ny Romanina, toy ny fandroana sy lakozia. Ny tena fantatra tsara eto dia ohatra Trier sy Xanten.
Ankoatra izany, manolotra fiangonana be voninahitra ny firenena. Indrindra indrindra fa ny Womenenkirche any Dresden sy ny Dom-Aachener dia nahazo laza iraisam-pirenena. Miaraka amin'ny trano maizin'ny vatany na ny tranon'ny Renaissance, dia manaporofo ny fisian'ny trano fonenana masina izy ireo.
Na raha tsy izany, ny Moyen Âge tsara nanana solontena: Alemaina dia nalaza noho ny maro lapa, izay efa be famerenana amin'ny laoniny ny saina sy ny sitrapony. Eto indrindra dia tokony ho voalaza ny trano manamorona ny renirano Rhin sy Moselle.
Ny tanim-boaloboka sy ny tongotra lavitra lalana manodidina ny renirano roa, dia teo amin'ny tantaram-pitiavana indrindra ny firenena iray manontolo, ary mifandray amin'ny toerana somary kely mora idirana manintona. Toy ny vao avy notapahina avy amin'ny folktale miasa Neuschwanstein Castle, izay fotsy sy mendri-kaja eo amin'ny havoana ala tany amin'ny faritra atsimon'i Bavaria.
Fa na dia ireo mpandeha izay mikatsaka ny hatsaran-tarehy voajanahary aza, dia tsy mivoaka any Alemaina foana. Misy valan-javona ny valan-javaboarim-pirenena 16, izay manana toerana sy tontolo iainana samihafa.
Ny telo amin'izy ireo dia mirakitra ny Wattenmehr malaza eran-tany, any avaratry ny firenena, izay ahafahana mitaingina fitsangatsanganana.
Ho an'ireo mpankafy ny faritra be tendrombohitra, ny Valan-javaboarim-pirenen'i Eifel, izay ahitàna ny sisin'ny hetsika volkano, ary ny Saxon Suisse miaraka amin'ny elbe sandstone dia tena mety. Tsy ny kely indrindra, maro dia ahitana valan-javaboary midadasika indrindra sy tsara tarehy ala, ohatra, ao amin'ny Harz Tendrombohitra, ny Black Forest na Hunsrück.
Browse our category Tranonkala fanoratana any Alemana.
Ny tany dia tonga lafatra ho an'ny mpaka sary matihanina sy mpaka sary. Tsy noho ny toetr'andro mahafinaritra fotsiny ihany, fa amin'ny antony maro samihafa azo tsapain-tanana ihany koa.
Farany fa tsy ny kely indrindra, azo atao ny manangona fizarana sy fitaovana fitehirizam-baingana saika na aiza na aiza, ary ny sary koa dia azo ampiasaina eo an-toerana ao anatin'ny fotoana fohy raha ilaina.